जन्मदिनमा केक काटेर बत्ति निभाउनु हाम्रो संस्कृति होईन, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ : अष्टलक्ष्मी शाक्य (भिडियो सहित) « Pariwartan Khabar
जन्मदिनमा केक काटेर बत्ति निभाउनु हाम्रो संस्कृति होईन, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ : अष्टलक्ष्मी शाक्य (भिडियो सहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले जन्म दिनमा केक काट्नु आफ्नो सस्कृति नभएको बताएकी छिन् ।
नेकपा काठमाडौं महानगर कमिटीले नेपाल सम्बत् ११४० को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शाक्यले भनिन्,“अहिले सामाजिक सञ्जालमा हामीले धेरै देख्ने गरेका छौँ सबैले जन्मदिन मनाउने गरेका छन् । जन्मदिन मनाएर फेसबुकमा हाल्ने अहिले चलन नै चलेको छ । सबैले जन्मदिनमा केक काट्ने गरेका छन् । केक काटेर खानुस् त्यसमा अन्यथा छैन । तर केक काट्नेसँगै बत्ती निभाउने जुन चलन छ त्यो कहाँबाट सुरु भयो ? जन्मदिन मनाउँदा आखिर हामी बत्ती किन निभाउँछौँ त ? हामी अन्धकारतिर नभएर उज्यालोतिर ढकेलिनु पर्ने हो नि ? कम्तिमा जन्मदिनको कुरा गर्दा हाम्रो परम्परालाई पछ्याउँ भन्ने मेरो कुरा हो । केक काट्ने कुरा हाम्रो होइन । भाषाकै कुरामा पनि मैले जोड गर्न चाहे । हाम्रो भाषालाई हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदा हाम्रै बच्चाले हाम्रो भाषालाई प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा छलफल गर्नु आवश्यक छ । महानगरले लागू गरेर मात्र भाषा जोगिदैन । ठिक छ अन्य भाषाहरु हामीले सिक्नुपर्छ तर हाम्रो भाषालाई हामीले कसरी महत्व दिने भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु आवश्यक छ ।”
शंखधर साख्वाप्रति उनको धारणा थियो, “मुख्य कुरा नेपाल सम्वत राष्ट्रिय सम्वत भयो । शंखधर साख्वा राष्ट्रिय विभूति हुनुभो भनेर गर्व गर्ने कुरा भने छैन । साँच्चै नै साख्वाका भावनालाई आत्मसाथ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अलि केन्द्रित हुन जरुरी छ । हामी प्रत्येकले उहाँको स्मृतिमा माला लगाउँछौँ । तर त्योसँगै उहाँको राम्रो भावनालाई कसरी आत्मसाथ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपाल सम्वत राष्ट्रिय सम्भवको रुपमा रहँदा हामीले यसलाई साँच्चै नै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको छलफल गर्नुपर्छ । किनकी आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको यो लक्ष्यलाई बचाउनको लागि संरक्षण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनेतर्फ महानगरको ध्यान जानुपर्छ ।
संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा जोड दिँदै शाक्यले भनिन् “अहिले संस्कृतिभित्र विकृति छाएको छ । यो कुरालाई हामी आफैँले पनि ख्याल गरिरहेका छैनौं । मैले दशैँको बेला पनि यो कुरा भनेको थिए । हाम्रो आकाश खाली किन हुन्छ ? दशैँको बेला भनेको चङ्गा उडाउने बेला हो तर किन यस्तो भएको छैन ? किन ल्यापटपमा हाम्रो चङ्गा उड्छ ? यो संस्कारलाई अब हामीले छलफल गर्ने कि नगर्ने ? यसभित्र धेरै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कुराहरु छन् । तर हामीले यसलाई स्थापित गर्न सकेनौँ । अबको बर्षमा आकाशमा चङ्गा उड्नुपर्छ । यसबाहेक दशैँभित्र अरुपनि विकृति भित्रिएको छ । विस्तारै यसलाई केलाउनुपर्छ । अब तिहार नै मनाइरहँदा पनि धेरै विभेदका कुराहरु म देखिरहेको छु । राम्रो कुराहरु त छदैँ छन्, जसले नेपालको पहिचान बनाएको छ । साथसाथै विकृतिका कुराहरु पनि रहेका छन् ।
हामीले हाम्रो देशको भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक विविधताले नै हामीलाई विश्वमा चिनाइरहेको छ । त्यसैले प्रष्ट रुपमा अब हामीले यो विविधतालाई अझै कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ त ? हाम्रो संस्कृति, भाषालाई हामीले बचाउन सक्यौ भने मात्र लामो समयसम्म यसलाई जोगाउन सक्छौँ, नेपाल भनेर चिनाउन सक्छौँ र नेपाली भएर बाँच्न सक्छौँ । त्यसैले समयमा राजनीतिक भन्दा पनि सांस्कृतिक छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ किनकी राजनीतिक कुरा हामी धेरै गर्छौ तर अब सामाजिक रुपान्तरणको एजेन्डा पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ । जबसम्म यो रुपान्तरणलाई हामी व्यवस्थित गरेर लान सक्दैनौं, साँच्चै नै सु–व्यवस्थित समाज हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ ।
संविधानले समेत परम्परालाई, संस्कृतिलाई एकअर्का मिलेर मनाऔँ भनेको छ । यसो भनिरहँदा संविधानले संस्कृतिभित्रको कतिपय गलत कुराहरु हटाउने विषयपनि उठाएको छ । त्यसैकारण साँस्कृतिक पर्वहरु जुन समयमा आउँछन् , त्यसबेला यसबारे छलफल गरेर अघि बढ्न सकियो भने हाम्रो संस्कृति अझै सु–सँस्कृत हुनसक्छ ।
हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ भने समयको रुपान्तरण अनुसार कतिपय संस्कृतिमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु आउँदैनन् । नयाँ ढङ्गले सँस्कृतिलाई हामीले विकास गर्न सक्दैनौं । त्यसैकारण यो हाम्रो काम हो । त्यसमा पनि अझ यो नेकपाको काम हो भन्न रुचाउँछु म ।”
पार्टी जीवनको सन्दर्भमा शाक्यको चिन्ता थियो, “यतिबेला हाम्रो पार्टी अनुशासनमा साह्रै कमजोर भएको छ । नैतिक आचरण साह्रै कमजोर भएको छ । उच्च स्तरमा बस्ने साथीहरुले आफ्नो धरातल गिराएको अवस्था छ । हामीले जसरी हुन्छ पदमा बस्ने, जे कुरामा पनि पैसा नै संकलन गर्ने गरेका छौँ । यसले गर्दा पार्टीको छवि साह्रै अप्ठ्यारोमा परेको छ । त्यसैले हामीले पुष र माघ महिनाभर वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रशिक्षण कामलाई जोड गरेका छौँ । त्यसमा पार्टीको दस्तावेज, पार्टीको मार्गदर्शनको बारेमा अध्ययन हुन्छ । महानगरले अब योजना बनाउनुपर्छ । मंसिर अन्तिमसम्म सबै कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका सबै कमिटीहरु निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ । पुषदेखि सबै पार्टीको स्कूलमा जाने भएकोले यो कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने बारे सोच्नुपर्छ ।
०८ फागुन २०७६, काठमाडौं पशुपति क्षेत्रमा देश तथा विदेशबाट आएका दर्शनार्थीहरुले शिवरात्रीको निकै रौनक बढाएका
बाँस्कोटाको राजीनामा स्वीकृत, थप मन्त्रालय सम्हाल्दै खतिवडा र नेम्वाङ [विज्ञप्ति सहित]
०८ फागुन २०७६, काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्रीबाट गोकुल बाँस्कोटाले दिएको
‘बरु प्रधानमन्त्री पद धरापमा परोस, भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गर्दिन’
०८ फागुन २०७६, काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई संरक्षण नगर्ने बताएका छन्।
‘जनताको पैसामा कमिसन खाने मन्त्री चाहिँदैन’
०८ फागुन २०७६, काठमाडौं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाविरुद्ध साझा पार्टीले बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको
एआइएका विद्यार्थीद्वारा धुर्मुस सुन्तलीलाई रंगशाला निर्माणका लागि नगद सहयोग
सुदुरपश्चिम महोत्सवमा नेबिसंघ जिल्ला सभापति भट्टमाथि अभद्र व्यवहार
अर्थमन्त्री खतिवडासँग अमेरिकाका काँग्रेस सदस्यकोे भेटवार्ता
इबीएलाई दोहोरो उपाधि